Abụ Ọma 94 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ekpere ọbụ abụ kpere ka Chineke bọọ ọbọ
‘Olee mgbe ndị ọjọọ ga-akwụsị ịṅụrị ọṅụ?’ (3)
Onye Jaa na-adọ aka ná ntị na-enwe obi ụtọ (12)
Jehova agaghị ahapụ ndị ya (14)
“Ha na-akpa nkata ka ha jiri iwu kpata nsogbu” (20)
94 Jehova, Chineke nke na-abọ ọbọ,+Chineke nke na-abọ ọbọ, gosi na ị dị ebube. 2 Onyeikpe ụwa, biko, bilie.+ Kwụọ ndị mpako ụgwọ ihe ha mere.+ 3 Jehova, olee mgbe ndị ajọ omume ga-akwụsị ịṅụrị ọṅụ? Olee mgbe ha ga-akwụsị ịṅụrị ọṅụ?+ 4 Ha na-ekwu ekwurekwu, na-etukwa ọnụ. Ndị niile na-eme ihe ọjọọ na-eto onwe ha. 5 Jehova, ha na-echi ndị gị ọnụ n’ala,+Ha na-emegbukwa ndị i ketara. 6 Ha na-egbu nwaanyị di ya nwụrụ na onye mbịarambịa,Ha na-egbukwa ụmụ na-enweghị nna. 7 Ha na-asị: “Jaa anaghị ahụ ihe na-eme.+ Chineke Jekọb amaghị ihe na-eme.”+ 8 Unu ndị na-anaghị eche echiche, ghọtanụ ihe a. Unu ndị nzuzu, olee mgbe unu ga-ama ihe?+ 9 Ọ̀ bụ na Onye kere ntị enweghị ike ịnụ ihe? Ọ̀ bụ na Onye kere anya enweghị ike ịhụ ụzọ?+ 10 Ọ̀ bụ na Onye na-adọ mba dị iche iche aka ná ntị enweghị ike ịbara unu mba?+ Ọ bụ ya na-akụziri ndị mmadụ ihe ka ha mara ihe.+ 11 Jehova ma ihe ndị mmadụ na-eche. Ọ ma na ihe ha na-eche bụ naanị ume e kupụrụ ekupụ.+ 12 Jaa, onye ị na-adọ aka ná ntị na-enwe obi ụtọ,+Ya bụ, onye i ji iwu gị akụziri ihe,+ 13 Ka i wee mee ka obi ruo ya ala n’oge ọdachi dakwasịrị ya,Ruo mgbe a ga-egwuru onye ajọ omume olulu.+ 14 N’ihi na Jehova agaghị ahapụ ndị ya,+Ọ gaghịkwa ahapụ ndị o ketara.+ 15 N’ihi na a ga-amalitekwa ikpe ikpe ziri ezi,Ndị niile obi ha dị ọcha ga na-emekwa ihe e kpebiri. 16 Ònye ga-anapụta m n’aka ndị ajọ omume? Ònye ga-enyere m aka ka m merie ndị na-eme ihe ọjọọ? 17 A sị na Jehova anaghị enyere m aka,M* gaarala anwụ kemgbe.+ 18 Mgbe m sịrị: “Ụkwụ m na-amịchapụ amịchapụ,”Jehova, ị nọ na-akwado m n’ihi ịhụnanya gị.*+ 19 Mgbe m nọ na-echegbu onwe m,Ị kasiri m obi ma mee ka ahụ́ ruo m* ala.+ 20 Gị na ndị ọchịchị,* bụ́ ndị na-arụrụ aka, ùnu ga na-emekọ iheMgbe ha na-akpa nkata ka ha jiri iwu kpata nsogbu?+ 21 Ha na-alụso onye* ezi omume ezigbo ọgụ,+Na-amakwa onye aka ya dị ọcha ikpe ọnwụ.+ 22 Ma Jehova ga-abụrụ m ebe m ga-agbaba, aka aghara ịkpa m. Chineke m bụ oké nkume m na-agbaba.+ 23 Ọ ga-eme ka ha jiri isi ha buru ihe ọjọọ ha metara.+ Ọ ga-eme ka ihe ọjọọ ha na-eme bibie ha. Jehova bụ́ Chineke anyị ga-ebibi ha.+
^ Ma ọ bụ “ndị ikpe.” Na Hibru, “ocheeze.”